Xildhibaan Dalxa “waxaan cabsi ka qabaa in Webiyadana muran la geliyo, iska daa badee” – Kalfadhi
Xildhibaan Dalxa “waxaan cabsi ka qabaa in Webiyadana muran la geliyo, iska daa badee”
March 7, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay shirkii shalay ku soo dhamaaday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kaas oo u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya.
Xildhibaan Dalxa ayaa walaac ka muujiyay shirkaas waxa uuna sheegay in Soomaaliya meel walba muran laga geliyay sababtuna waxay ku sheegay in dan gaar ah ay fiirsanayaan hogaanka Soomaaliya taasina ay mustaqbal la’aan ay ku keeni karto dalka iyo dadka.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Internet-ka ayuu ku sheegay in xaaladaha muuqda aysan aheyn kuwa loo dulqaadan karo balse loo baahan yahay midnimo iyo wadajir in looga baxo sida uu hadalka u dhigay Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
“Dorraad Shaki-gelin Dacwadda Badda ayey aheyd, Shalayna Xaraash Shidaalka Qaranka, Maantana waa Tanaasul , Berrito waxaan shaki ka qabaa beecinta Wabiyada Dalkaa” ayuu yiri Maxamed Cumar Dalxa oo katirsan Baarlamaaka Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa moodaa in culees badan ay kala kulmayso xubno katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar katirsan shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo shaki ka qaba Shirkii shalay ku soo idlaaday Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Xubno katirsan Aqalka Sare oo ka walaacsan heshiikii magaalada Nairobi ee Soomaaliya iyo Kenya
Baarlamanka dowladda Puntland ee Soomaaliya iyo kan Jamhuuriyada Djibuuti oo is dhaafsanaya wada-shaqayn iyo isbarasho